ပရို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ပရို
Posted by မြစပဲရိုး on May 17, 2015 in Critic | 25 comments
အမှန်တော့ ဒီ စာ တွေကို မှတ်ချက် လိုမျိုး ပေးချင်မဲ့ ဒါ့ပုံလေး တစ်ပုံလဲ ပြချင်လို့ ပို့စ် ရေးပြီး ဘဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
Arakan Army Commander-in-Chief Brig-Gen. Tun Myat Naing attends an ethnic armed groups’ conference in Wa region’s Panghsan town on Monday. (Photo: JPaing /The Irrawaddy)
ဒီပုံ ကို ကြည့်ကြည့် ကြပါ။
ဒီ အရီး တော့ ဖွန်ကြောင်နေပြီ ပြောလဲ ပြောပေရော့။
တကယ် သဘောကျလိုက်လို့ တင်တာပါ။
စိတ်ထဲ အတော်လေး ကြည့် ကောင်း တယ် လို့ ထင်မိတယ်။
လူတွေ က အဲလို ယူနီဖောင်း ဝတ်ထားချိန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ပြီး ပိုပြီးလဲ တင့်တယ် သွားသလားဘဲ။
အထူးသဖြင့် စစ်သားတို့၊ လေယာဉ်မှူး တို့ ပေါ့။
ယူနီဖောင်း က နေ သူ့ရဲ့ ပရို အလုပ် ကို ဖော်ပြပြီး အထင်ကြီး အားကျ စေတယ်။
အခု ပုံကလဲ ရခိုင်သူပုန် လို့ အမည်တပ် နိုင်ပေမဲ့ သူ နဲ့ အဲဒီ စစ်ယူနီဖောင်း က မင်းသားတောင် လုပ်လို့ ရအောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပါတယ်။
အဲဒါကို သူ့ကို သူ မင်းသား လိုလို မော်ဒယ်လိုလို မျက်နှာပေး နဲ့ ပို့စ် တွေပေးပြီး ဆဲလ်ဖီ ကြည့်ပါလား။
သူ့ရဲ့ တိုက်ရည် ခိုက်ရည် အစွမ်းရှိတဲ့ ပရို တစ်ယောက် ရဲ့ image ပျက်သွားမှာ လေ။
သူက မင်းသား မှ မဟုတ်တာ။ စစ်မြေပြင်မှာ တိုက်နေတဲ့ စစ်သားဘဲ။
သူ့ ဒီ ယူနီဖောင်း ဝတ်ချိန်မှာ စစ်သား ဟန် နဲ့ မာန်ပါ နေတဲ့ ပုံရိပ်သာ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။
ဒီ အရီး တော့ ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတယ် မသိလို့ မျက်စိလည် သွားပြီလား။
ဒါ့ပုံ ပြပြီး မဆိုင်တဲ့ စကား တွေ ရှုပ်ထားမိလို့ ခွင့်လွှတ်ပါ Gen. ထွန်းမြတ်နိုင်။
တကယ် ပြောချင်တာ က သူ့ ပုံ ကို မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီရက်ထဲ ဖဘ စာမျက်နှာပေါ် မှာ အတော် ပွ နေအောင် မျှထား တဲ့ မိန်းကလေး လေယာဉ်မှူး တစ်ယောက် ပုံ ကို ပြောချင်တာပါ။
အသက်ငယ်ငယ် ရုပ်ချောချော နုနု လေး တွေ က ဒီ လို လူတိုင်း မလုပ်ရဲ တဲ့ အလုပ်မျိုး တွေ မှာ အားမာန် အပြည့် နဲ့ လုပ်ပြလာတာ အတော်လေး ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက် က ယောကျာင်္းတွေ နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး လေယာဉ်မောင်း လာနိုင်ကြတာ ကို အားလဲကျမိပါတယ်။
အဖြူရောင် ယူနီဖောင်းလေး ဝတ်ထားတဲ့ ပရို မိန်းကလေး ဟာ ကြွကြွရွရွ မဟုတ်ဘဲ ကျားကျားယားယား မာမာထန်ထန် မျက်နှာပေး နဲ့ ဟန် ဖြစ်သင့်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ်။
ဒါမှ သူမောင်းတာကို စီး ရမဲ့ ခရီးသည်များရဲ့ စိတ်ထဲ လုံခြုံမှု ရှိပေတော့ မပေါ့။
ဒီလို မဟုတ်ဘဲ လေယာဉ်ခေါင်းခန်းထဲ ထိုင် မော်ဒယ် တစ်ယောက်လို မျက်နာပေးနဲ့ ဆက်စီဖြစ်အောင် နှုတ်ခမ်းထော်ပြီး လေယာဉ် သွားနေချိန် တိမ်တွေ နဲ့ ဆဲလ်ဖီ ရိုက်နေတာ တွေ့လိုက်ရင်တော့
ဒါ ပရို တစ်ယောက် အနေနဲ့ အလုပ်လုပ် နေတာ မဟုတ်တော့ ဘူး။
ဒီလို အီရုပ် နဲ့ မိန်းကလေး ကို လဲ လေယာဉ်မောင်း သူ တစ်ယောက်လို အထင်ကြီး လို့ မရနိုင်ဘူး။ သူမောင်းမဲ့ လေယာဉ်ကိုလဲ မစီးရဲဘူး။
မော်ဒယ် လို ရိုက်ချင်ရင် အလုပ်ချိန် ပြင်ပ မှာ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
ပရို အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အလုပ်ချိန်မှာ အလုပ်ထဲမှာ ပရို လို နေမှ တင့်တယ်ပါတယ်။
အာ့လေး ပြောချင်တာ ဖဘ ထဲ
မပြောလဲ မပြောရဲ လို့။ lol;-)))
ဒီ ရွာ ထဲ က စာ တွေ ကို ရွှေပြည်ကြီးက တစ်ခြားသော စီနီယာ လေယာဉ်မှူး များ မတော်တဆ ကြုံကြိုက်လို့ ဖတ်ခဲ့မိကြ ရင်လဲ သိနိုင်အောင်လို့၊ သိစေချင်လို့ လဲ ဒီမှာ ရေးပါတယ်။
သများးရဲ့ AA ရောဂါ ကို အမြင်ကတ်နေကြတာ ၂ပတ်လောက်ရှိပြီ၊
ရွာထဲက အမျိုးးတချို့ ဖဘ မှာ သများး ဖွန်ကြောင်တဲ့ ဒဏ် ခံနေရတာ။
ပြီးးတော့ ဒါ က မနေ့ ည က တင်တဲ့ စတေးးတပ်။ ကော်မန့် မှာ အရီးးပြောသလို ပြောမိသေးးတယ်
သူများးတွေ က ဂုမှ ပိုင်းးလော့မမ ရောဂါရနေကြတာပါ…
သများးတို့မှာ ကိုကြီးးနို ကို မြင်ပြီးတည်းးက ပိုင်းးလော့ကိုကိုရောဂါ ဖြစ်နေခဲ့သူပါ….
Zaw Thant ပို့စ် ထဲက သွားးယူလာတာ
၆။ နံပတ်နဲ့ ငြိ နေတယ်
.. ပြောစရာသိပ်မလိုပါဘူး..ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိထားရမယ်ပေါ့.. တချို့အလုပ်တွေအတွက် ဘွဲ့တွေထောက်ခံချက်တွေလိုပေမယ့် တချို့အလုပ်တွေကျတော့ လည်း အဲ့လို စာရွက်အထောက်အထားတွေ သိပ်မလိုပါဘူးတဲ့..အဓိက ကတော့ အမြဲ up-to-date ဖြစ်ဖို့တော့လိုမယ်.. ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ့် အသိရှိနေရမယ်ပေါ့.. မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဖြစ်မဲ့လူဟာစစ်ရေးအမြင်ရှိရမယ် ဆိုတော့ ဘယ်လို ကြီး တုန်း စစ်သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပါဖို့အထိလိုသလား..စစ်ရေးအမြင်ရှိရမယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ စီးပွားရေးအမြင်တို့ဘာတို့ကော.. စသည်ဖြင့်စဉ်းစားစရာ..
.. လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းပြည့်နေရမယ်.. ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်၊အခက်အခဲပေါ်လာရင်လည်း ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်ပေါ့.. Professionals don’t make excuses,but focus on finding solutions တဲ့.. စစ်သားဆို စစ်တိုက်ရမယ်၊ အငတ်ခံနိုင်ရမယ်၊ အသေခံရဲရမယ်..ဆရာဝန်ဆို အိပ်ရေးပျက်ခံနိုင်ရမယ် ကိုယ်ပိုင်အချိန်အပဲ့ ခံနိုင်ရမယ်၊ စိတ်ရှည်ရမယ်..customer service လုပ်တဲ့ လူများ သည်းခံနိုင်ရမယ်၊ စိတ်တိုလို့မရဘူး၊ သိပ်ခံစားနေလို့မရဘူး..ရဲတွေလည်း အပင်းပန်းခံနိုင်ရတယ်၊ အရိုက်ခံရတယ်၊ အမုန်းခံရမယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့.. ဘယ်သူမှသိပ်ညည်းနေလို့ မရဘူး.. ရအောင်ကျော်လွှားပြီး လုပ်နိုင်ရမယ့်သဘော.. ဆက်မပြောတော့ပါဘူး(ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ်ပဲ အမုန်းခံရလိမ့်မယ်)
၃. Honestyand Integrity
.. ပိုခက်လာပြီ.. ရိုးသား ဖြောင့်မတ် ရမတဲ့.. ဒီခေတ်နဲ့တော့..ထားပါတော့ ရေးထားတာကတော့ ရိုးသားရမယ် ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ လူဖြစ်ရမယ်၊ စကားတည်ရမယ် တဲ့..အစိုးရများ၊ ဝန်ကြီးများကို ချိန်ထိုးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်.. နောက်ပြီး ကိုယ်မတတ်နိုင်ရင်မတတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်း ဝန်ခံရမယ်.. တတ်နိုင်တဲ့လူကို ဆက်လွှဲရမယ်.. စေတနာအမှားပါဆိုပြီးလုပ်လို့မရဘူး..
.. ပိုပိုပြီးခက်လာပြီ.. တာဝန်ခံနိုင်ရမယ်တဲ့.. ကိုယ့်စကား၊ကိုယ့်အပြုအမူ၊ ကိုယ့်အမှားအတွက် တာဝန်ခံနိုင်ရမယ်.. ဒီလိုတာဝန်ခံနိုင်ဖို့ အပေါ်က Honestyand Integrity လိုပါသတဲ့.. ဥပမာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ဖြိုခွဲဖို့ ပေါက်ကရလူတွေ လက်ပါတ်ဝတ်ပြီးလုပ်ခိုင်းတာ ဘယ်သူတုန်း.. သမ္မတကြီးလား၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလား၊ ရဲဘက်ကလား၊ ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကို ဘယ်သူကတာဝန်ယူမှာတုန်း.. ဘယ်သူကလုပ်ခိုင်းမှန်းမသိ ဖေ့ဘွတ်ဝန်ကြီး နှစ်ယောက်ကပဲဒိုင်ခံဖြေရှင်းနေတာ မဟုတ်သေးဘူး.. ကိုယ်လုပ်တာ မမှားဘူးလို့ယူဆရင်တောင် ဘာကြောင့်လုပ်ခိုင်းတယ်ဘယ်လိုတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာ ပြောနိုင်ရမယ် (ဂျပန်ဝန်ကြီးတွေလို နုတ်ထွက်ဖို့ အထိမပြောပါဘူး)..
.. ပိုပိုပိုပြီးခက်လာပြီ.. မိမိခံစားချက် အပြုအမူကို ထိန်းနိုင်ရမယ်..customer service လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဒေါသထွက်နေတဲ့ customer နဲ့ အပြိုင် ဒေါသထွက်လို့မရပါဘူး.. အိမ်မှာစိတ်တိုလာတဲ့ ဆရာမ ကျောင်းက ကလေးတွေဆီမှာ ပေါက်ကွဲလို့ မရပါဘူး..ဒေါသကြီး ရန်ရှာနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို ထိန်းမယ့် လုံခြုံရေးရဲ အဖွဲ့ဝင်များလည်း အပြိုင်ဒေါသထွက်နေလို့ပေါက်ကွဲလို့ မရပါဘူး.. လက်နက်ကိုင်စစ်သားတွေ ရှေ့တန်းရောက်တဲ့ အချိန် ဥပဒေအားနည်းတဲ့တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေမှာ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမူတွေ မရှိအောင်လည်း ဒီ Self-Regulationလိုပါတယ်.. အခုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ရဲ – ကျောင်းသားပြဿနာ မှာ ရဲ တွေဖက်က Self-Regulationအားနည်းတာတွေ့ရပါတယ်.. ရှေ့လျောက်လာဖို့ရှိပါသေးတယ်.. ဘောလုံးပွဲလူရမ်းကား၊ လယ်သမား၊အလုပ်သမတွေ၊ ကျူးကျော်တွေ၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ကိုင်တွယ်ရဦးမှာပါ.. သဘောကောင်းတဲ့ရဲက သဘောကောင်းသလို စိတ်တိုလွယ်တဲ့ ရဲက စိတ်တိုသလိုလုပ်လို့ မရပါဘူး.. lawenforcer တွေအနေနဲ့ Self-Regulation ပိုအရေးကြီးပါတယ်.. ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကတော့ တရားဝင်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်တဲ့ အတွက် Self-Regulation တွေပါတွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ပစ္စည်းနဲ့ပေါက်တာ ထုတာတွေပါမှာပဲ.. ဒါကိုကိုင်တွယ်ဖို့ law enforcer တွေက Competency ရှိဖို့လည်းပါတယ်..
..ကိုယ့်ပုံရိပ်အတွက် သင့်တော်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မူ၊ အပြုအမူလိုပါတယ်တဲ့..လွှတ်တော်ထဲ ငိုက်နေတဲ့ အမတ်များ တွေ့ရရင် ကိုယ်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုများအားကိုးချင်စိတ်ရှိမလဲ..
အဲ့ပုံက အစည်းအ​ဝေးမှာရိုက်​ထားတာ​ကော၊ မတည်​လို့မရတဲ့နေရာလေ
ဟို ပိုင်းလော့မ​လေးက သူ့အလုပ်​ခွင်​မှာရိုက်ပြီးတင်​တာလေ
ချစ်သောမျက်​စိဖြင့်ကြည့်လျှင် အပြစ်​ရှာစရာ မမြင်​တာမို့
သုံးရက်လောက်တော့ အဲ့ ပိုင်းလော့မ​လေးကို ကြွေပါရ​စေဦး နော်
ပြီးမှ အရီးပြောတဲ့အချက်တွေကို စဉ်းစားပါရ​စေ
I agree it because of my poor-man. Heeee
ဖက်​ဖ်​ ဖစ်​ဖတင်း ​တွေ အမ်​အိုင်​ဂျိီတ်ွမ်​တိီနိုင်းေ​တွေ ​မောင်းတဲ့ဖိုက်​တာပိုင်း​လော့ဆဲလ်​ဖီ​တွေ​တောင်​
တပြွတ်​ကြီးတင်​​နေတဲ့​ခေတ်​မှာ င့ည​ယေးကျမှ ကံကွက်​ကြားမိုးရွာခံရရှာတယ်
လိင်​ဗျံမှူး ဆိုတာ အမြငိ့​ပေ ၃၇၀၀၀နဲ့အထက်​ လမ်း​ကြောင်းမှန်​ ၀ယ်​သာဖိုင်းေ​နေရင်​ လုပ်​စရာသိပ်​များများစားစားရှိအံ့မထင်​
ဒါ့​ကြောင့်​ ​မောင်း​နေစဉ်​ ဆဲလ်​ဖီမရိုက်​ရ စည်းကမ်းထုတ်​ထားအံ့မထင်​
အရီး​ရေ AA ချုပ်​ကြီးက ဥပဓိရုပ်​​တော့ အ​တော်​​ကောင်း
ပိုင့်​​လော့မ​လေးက ​လေယာဉ်​ ​မောင်းတဲ့အလုပ်​ကို လုပ်​မလား​တော့မသိ
ပိုက်​ပိုက်​ ​တော်​​တော်​ရှိမှ တက်​လို့ရတယ်​ ​ပြောတယ်​
သဘုံ ဘိလပ်လာရင် ရှင်ကားပူ ထရန်စစ် တော့ မလုပ်နဲ့ ကွယ်။
အဲ့မှာ ပြန်ပေးဆွဲ မဲ့ သူ ရှိနေတာရော။ ဟိ lol:-)))))
ဟိုလူကြမ်းကြီးနဲ့ နှိုင်းခံရတယ်လို့ .. ဟိုကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ..အသဲလေးက ကော်မာရှယ်ပိုင်းလော့ …တနည်း service industry က … မတူရေးချမတူ….
ခေး ကို ထိညဲ့…
အို သားလေယာဉ်မယ်လေးကို မပြောနဲ့….. ဘူမှမစီး သားသူနဲ့တူတူစီးမယ်။ ငိငိ။
.အင်း..ငါတျောက်ပဲ လိင်​ဗျံမှူး မကိုမသိ..ခေတ်မမှီချက်ကွာ..ကတောက်စ်
ဒီအတိုင်းနေရင်း … ယူနီဖောင်းကျကျနန ဝတ်တာတော့ ထားပါတော့…
(ပုခုံးမှာ ရှိနေတဲ့ အရစ်တွေ အပွင့်တွေ ပြချင်လွန်းလို့ ) စစ်ယူနီဖောင်းကြီးဝတ်ပြီး… မင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတွေကိုရော.. အရီး ဘာပြောမလဲ…
သတို့သမီးက… မြန်မာဆန်တဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့.. သတို့သားကတော့… ဗိုလ်ဝတ်စုံကြီးနဲ့..
ဝတ်စုံပြည့်လည်းမဟုတ်… (အတိအကျဆို..သေနတ်ပါ လွယ်ထား / ခါးကြားထိုးထားပေါ့)
ကျနော်တော့…အဲဒီလို မြင်ကွင်းမျိုးကို… ကြည့်ရတာ ထောင့်မကျိုး….ရေးချ မကျိုး…
နျူးဘာဂိုဏ်းသား ဘယ်နှယ်ယောက်ရှိလဲ စာရင်းကောက်တာလားးးးး
အဲ့ လိင်​ဗျံမှူးမ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး
သူ့ပရိုအလုပ်ကို စိတ်ချယုံကြည်ပြီး လေယာဉ်မစီးရဲပါဘူး ……. :e:
အချစ်အတွက်ဖြင့် အသက်ပင်သေသေဆိုပြီး သက်သေပြချင်တဲ့ နျူးဘာဂိုဏ်းသားတွေအတွက်တော့ အခွင့်အရေးကောင်းကို လက်မလွှတ်ကြနဲ့။
အဲဒီ ဆဲလ်ဖီ ဆိုတာကြီး အကြောင်း ဒီ ရက်ထဲ ပြောချင်နေတာ
ဟိုရက်က နယ်က တူမလေး တစ်ယောက် ရန်ကုန်ကို လာလည်တယ်
အပြင်လိုက်ပို့ စားသောက်ဆိုင် လိုက်ကျွေးတော့
ကားပေါ် စ တက် ကတဲ က မျက်နှာပေး အမျိုးမျိုး နဲ့ ရိုက်လိုက်တဲ့ ဆဲလ်ဖီ
ဆိုင်ရောက်တော့ လဲ မရပ်သေးဘူး အစားအသောက်ရိုက်လိုက် လူ ရိုက်လိုက် နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လဲ စိတ်မ၀င်စား ပြောတဲ့ စကား လဲ အလေး မထားနဲ့ သူ လဲ ဆဲလ်ဖီ ရိုက် ကိုယ်လဲ လူ ရိုက် ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာတယ်…( တင်တဲ့ ပုံတွေကို တလွဲ အသုံးချသူတွေနဲ့ တွေ့ရင် လူရိုက်ခံရတာထက်တောင် ဆိုးဦး မယ် )
ကျနော့် သဘောကတော့ ခရီးသွားရင်းနဲ့ အမှတ်တရ တပုံတလေ မှတ်တမ်း တင်တာကလွဲလို့ ဆဲလ်ဖီ ရိုက်တာ လူရှေ့ လူလုံး ပြရတာတွေ ကို လုံးဝ ၀ါသနာ မပါပေမဲ့ ၀ါသနာ ပါ လို့ ရိုက်သူ တင်သူတွေကိုလဲ သူ တပါးကို မထိခိုက်ရင် ဘာ မှ မဝေ ဖန် လိုပါဘူး
ခေးမလေး ကိုလဲ ဖွဘုတ် မှာ စတွေ့တော့ နိုင်ငံခြားမှာ တက်နေတဲ့ မြန်မာမလေး ပဲ ထင်နေတာ
သူ့ အကောင့်ထဲ ၀င်ကြည့်တော့ မှ ပုသိမ် မှာ သင်တန်း တက်နေမှန်း သိတာ
ပျံသန်းမှုကို မထိခိုက်ဘူး သူ တပါးကို မထိခိုက်ဘူး ဆို သူ ဘာ သာ ရိုက်တာ တင်တာ တွေက ဘာ မှ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ အခု တင်နေတာတွေလဲ လေယာဉ်မောင်း သင်တန်း တက်နေဆဲ ကာလ ငယ်ရွယ်တဲ့ အရွယ်မို့ လုပ်တဲ့ အပြုအမူ လို့ ပဲ ယူဆပါတယ် ၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်သွားရင်တော့ အသက်အရွယ်အရ လဲ ရင့်ကျက် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကြောင့်ပါ အရီးပြောတဲ့ ပရို ပီသ တဲ့ လူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်
အဲဒီလို ဖြစ်မှလဲ အဆင်ပြေမှာ သူ တို့ လျှောက်ရမဲ့ လမ်း က လွယ်လွယ်လေးတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်
ဟို အရင်က လေယာဉ်မောင်းချင်သူ တစ်ဦးအတွက် လေတပ်ထဲ ၀င်တဲ့ လမ်းက လွဲလို့ ရွေးစရာ မရှိဘူး
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အတွက်က ဘယ်လို့ မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ၊ ၉၇ ၀န်းကျင်လောက် က မှပြည်တွင်း နဲ့ ပြည်ပ မှာ အစိုးရ အစီအစဉ် နဲ့ သင်တန်း သွားတက်ခွင့်ရတဲ့ အရပ်သား ကံထူးသူ ဆယ်ဂဏန်း နဲနဲ ပဲ ရှိခဲ့တာ
အခု နောက်ပိုင်း (၂၀၀၉ လောက်) ကျမှ သာ မလေး ဖိလစ်ပိုင် တို့ မှာ လေယာဉ်မောင်း သင်တန်းကို ကိုယ့်အစီအစဉ် နဲ့ ကိုယ် တက် ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းက ပွင့်လာတာ အခုတော့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ ပုသိမ် မှာပါ ဖွင့်လာတာပေ့ါ သူ တို့ သင်တန်း တက်တဲ့ အခါ အနဲဆုံး သိန်း ၆၀၀ ကနေ ၁၂၀၀ လောက်ထိ ကုန်ကျ ရတာ ကျနော်တို့လို သာ မန် မိသားစုတွေအတွက် ဘယ်လွယ်ပါ့ မလဲ ( စကောလား ရတဲ့ သူတွေကတော့ ကံထူးသူပေါ့ ) အဲဒီလောက် အကုန်ခံပေမဲ့ အလုပ်သေချာပေါက် ရ မယ် လို့ ဘယ်သူ မှ အာမ မခံနိုင်ဘူး အခုထိ အလုပ် ရဘို့ စောင့်နေတဲ့ သူ အများကြီး
မိန်းကလေး တွေပဲ ကြည့်ရင်တောင် လက်ရှိမောင်းနေတာ ၆ ယောက် ရှိတယ်လို့ သိရတယ်
အလုပ်ဝင်တဲ့ ကာလ သိပ်မကွာကြတာတောင် ကြိုးစားမှု အခြေအနေပေးတာနဲ့ အထွေထွေသော အကြောင်းတွေကြောင့် ရ တဲ့ အဆင့်အတန်း ချင်းက မတူဘူး ၊ ဒီ အလုပ် က စောင်းသမားလို လက်မပျက် နေဘို့ လိုတာမို့ တစ်ယောက်ဆို အိမ်ထောင်ကျ ကလေးယူလိုက်တာ နဲ့ အစ ကနေ ပြန်စရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားရော၊ အလုပ်ရပြီးတဲ့ နောက်တောင် မှ အလုပ်ကို စိတ်မ၀င်စားပဲ
တခြားကိစ္စတွေပဲ စိတ်ဝင်စားနေရင်တော့ ရေရှည် ရပ်တည်ဘို့ ခက်ခဲ မှာပါ
သား သမီး ချင်း ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ အနေနဲ့ ခေးမလေး ရင့် ကျက် မှု တွေ နဲ့ ဒီ လောက ထဲ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးနေပါ့မယ် ၊ သူမောင်းမဲ့ ခရီးသည်တင် လေယာဉ် တက်ချင်တဲ့ အမြင့်တစ်ခု ရောက် လို့ crusing လုပ်နေတုန်း စက်ကလဲ ကောင်း ရာသီဥတုကလဲ ကောင်း မို့ အော်တိုပိုင်းလော့ နဲ့ မောင်းနေချိန် အခြေအနေပေးလို့ ဆဲလ်ဖီ တစ်ခါတစ်လေ ရိုက်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ နားလည်ပေးလိုက်ကြပါ
အဲ ခေးမလေး မောင်းရင်တော့ ကျနော်လဲ လိုက်စီးချင်တယ် အရီး ရဲ့ ( မစီးခင်တော့ ကိုချော ကြီး လို မိန်းမ ဆီက ခွင့်ပြုချက်တော့ တောင်း ရ ပေ မပေါ့ )
အလိုလေးလေး အင်နဲ့အားနဲ့ အပြေးလာပြီး အကာအကွယ်ပေး နေလိုက်ကြတာ။
အခုတော့ အချိန်မရ လို့ နူးဘာဂိုဏ်းသားများ တွေ့မယ်။
အပြင်မှာ ဆိုလိုကတော့ မင်းတို့ အားလုံး နားရွက် တွေ ပြတ်ပြီမှတ်။
ကိုနို – အလျှောက်ကောင်း မို့ စိမ်းလိုက်ပါတယ်။
Cadet လေးမှန်း မသိလိုက်လို့ပါ။ အဲဒီအတွက် တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလို ချောလှ ရုံတင်မက ဉာဏ်ကောင်းတဲ့၊ သတ္တိကောင်း တဲ့ မိန်းကလေး ကို အဆင့်မြင့်မြင့် တန်ဖိုးကြီးကြီး ပုံစံ နဲ့ ဆက်မြင်ရမယ်လို့ မှန်းပါတယ်။ :-))
ဇီကလေး ရဲ့ မှတ်ချက် နဲ့ ကျေးဇူးပါ မောင်ဇော်သန့်။
ဆက်ဆက် – အဲဒါက သူတို့ မှာ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် ရှိတယ် ထင်ရဲ့။
အရီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဆို ယူနီဖောင်းပါမှ စိတ်ဝင်စား မယ် ကို ပြောတာ။ အခုခေတ်တော့ မသိဘူး။
အရင်က စစ်ဗိုလ် နောက်တော့ ကပ်စတန် နောက်တော့ သဘောင်္သီးအရာရှိများ စန်းထခဲ့ကြတာ။
ရွာထဲ ဒီလူတွေ ရှိတာ။ တွေ့ရင်မေးကြည့်။ သူရို့ ဘယ်လို ရှောင်တိမ်းပြီး ပါတ်ပြေးရတယ် ဆိုတာ။
ဒါထက် သူရို့ ပြီးတော့ ကိုယ်တို့ အလှည့် ဇီ၊ ဒေါ်လေး ဟို အဖွဲ့ နောက်လိုက်မား။
မမ ရော ပါဦးမား။
ကျွန်မကိုလဲ ချန်မထားခဲ့နဲ့နော် …
အခုတော့ သတင်းတွေ အရ အဖွဲ့ထဲ ဝင်ရင် အကုတ်ခံ ရဖို့ရှိတယ်။
ဒီတော့ ချစ်ကြည်ရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး သွားစည်းရုံး သင့်မလားဘဲ။
အစ်မဒုံ ကိုလဲ အပါခေါ်မည်။
. ကြောင်ဝ လေး ကိုလဲ ခေါ်မည်။ lol:-)))))
အရီးတစ်သက်လုံး လုပ်သင့်၊ ဖြစ်သင့်၊ စံထားသင့်တာတွေနဲ့ပဲ … အချိန်ကုန်နေတာလားဟင်.. သနားလိုက်တာအရီးရယ်… ဟီးးးးး (အသလွတ် ၀င်ရန်စသီ)
အပြင်မှာ တကယ် မပရို နိုင်လို့ ဂလိုဘဲ အသံကောင်း ဟစ် ဟစ် ပြနေရတဲ့ ဘွပါအေ။
စာထဲ ရေးပြ ဆုံးမ ရတာ ဂလောက် လွယ်တာကို။
ဒါထက် ဒေါ်ဝါးလေးရော အရီးတို့ ရဲ့ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရေး ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ထဲ ပါမား။
ဒီလောက် ချောချက်အေ။ တွေ့လား။
ဟို..မယ်ဇီ ဒီအဖွဲ့ထဲပါရင်တော့ ခညာ၆ရှာတော့မှာပဲ အရီးရယ်..
နိ ဒို့ က ရေ ပုံမှန် ဖြန်းးပေးးးဂျအေ..!!!
၆ရင် ပိုတောင် ကောင်းသေးဝုတ်ဘူးလား။
ဆီဆမ်း ဆားဖြူးလေးပေါ့။ lol:-))))
တခြားမိန်းမနဲ့ ဖောက်ပြန်မှာ ပူရတော့ဝူး
တစ်ခြား ကျားကြီး နဲ့ ကြောက်ရသေးလယ်။ lol:-)))